Ko mutemo wenyu webhizimisi unogona kubatsirei kubva mukugadzira backlink muumbi?
Kuzadza unhu hwekudzokera shure kwakakosha chikamu chekutsvaga kwekutsvaga injini yekugadzirisa. Zvisinei, kana iwe kamwe chete wakamboita kushanda kwe-site, ipapo unofanirwa kuziva kuti kuvakira backlinks dzinowanikwa uye dzinoshanda kusimudza nzvimbo yako yepaiti, yakaoma uye inonetsa. Iko yekupedzisira yeGoogle update yakaita kuti zvive zvakakosha kutarisisa hutano hwehutaneti hunobatanidza kwauri nekukosha kwekubatanidzwa kwekunze.
Muchikamu chino, tichakurukura zvakajeka kuti mashandiro ako emutemo anogona sei kubudisa zvakakonzerwa nehutano hwehutano hunounza zviitiko zvinooneka kune bhizinesi rekutengesa pasina kushandisa kunyange.
Kubva shure kwekwangwani kune webhusaiti yemutemo
Kuwedzera kwekubatana kwemashoko kunoratidza iwe webhusaiti yako, Google yakavimbika inotora nzvimbo iyo, uyezve, inopa kune iyo.
Zvose mawebsite ane zvigaro kune vashandisi zvinowanzobatanidzwa nehuwandu hwezvigadziriswa nevashandisi uye zvadaro zvakakwirira kumusoro kweSERP. Apo mabhidhiyo akadaro eWikipedia, Forbes kana CNN anoonekwa mumigumisiro yekutanga yekubvunza kwako, haufaniri kupedza nguva yakawanda uchitsvaga ruzivo rwakada. Nokuisa mawebsite epamusoro uye ane kodzero pane zvigaro zve TOP, Google inovandudza ruzivo rwevashandi pamwe nekutsvaga system.
Nzira dzekuwana ruzivo rwemajisi ndezvekugadzira zvidzidzo uye zvigadzirwa zvehutano uye zvinomirira kuti zvipararire muwebhu. Zvisinei, vamwe vadzidzisi webhusaiti havagoni kumirira kusvikira vawana hukama huripo uye vachitarisa kune vakasiyana-siyana vanoridzika kumashure.
Muumbi we backlink anoshanda sei?
Automated backlink creators inogadzira backlinks nekukurumidza uye inovimbisa kuti izvi zvakabatana zvinobva kune zvakakwirira. Zvisinei, sezvandakambotaurwa ndisati ndawana unhu hwekunze hunotora nguva nekuedza. Ndicho chikonzero mazano avo anonzwika zvakanyanya kuti ave echokwadi. Pasi pose, muumbi we backlink anoshanda nekuve nedhesi yakazara yewebsite iyo iri nyore kutumira kune. Muzviitiko zvakawanda, nheyo idzi dzine zvivako zvakange zvichangobva kutengwa nemusiki we backlink. Uyezve, mabhoti ezvinoshandiswa zvinosangana kuvaka shanduro inoita zvinyorwa zvinyorwa pamablog uye maforamu pamwe nekubudisa zvinyorwa kune mamwe mawebhu akasiyana. Sezvo mutemo, vatambi vekudzokera shure vanotumira nyaya yenyu ne backlink kune nhamba yakawanda yemasiti asingatsvaki kutumirwa.
Chimwe chikomborero chakakonzerwa nemusiki wekudzokera shure ndechekuti inogona kuunza mutsva webhu hutsva pane pekutanga rekutsvaga peji nemamwe mazwi makuru mukati memakore mashomanana.
Ndeapi matambudziko aungatarisana nawo uchishandisa musikana we backlink?
Pamutambo, chinongedzo chekutsvaga chizvarwa chinopesana zvakasiyana nehupenyu hwekuvaka chibvumirano uye chinoratidzika kuti chinokonzerwa neinjini.
Kana mutemo mutengesi wemabhizimisi achisarudza kushandisa backlinks muumbi, zvinogona kumuita mukurumbira webhizimisi rake. Sezvo zvigadzirwa izvi zvakazvigadzira zvinokonzera mikana yakawanda yehurombo hwakagadzikana zvakagadziriswa kukurudzira webhusaiti uye kuwana mamwe backlinks, vashandisi vanobatanidza zvinhu izvi zvinodhaka nekambani yenyu yemutemo.
Imwe dambudziko raungasangana naro kushandisa vashandi vekudzokera kumashure ndeyekuregererwa kweGoogle kunowedzera kuoma pashure pekupedzisira Penguin update. Izvi zvikwanganiso zvinogona kuparadza zvose SEO yako kuedza uye zvinokonzera web source kudzvinyirira Source .